Dingana 12 mankany amin'ny fahombiazana amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Ireo olona ao amin'ny BIGEYE, masoivohon'ny serivisy famoronana dia manana atambatra ity sary ity hanampy ny orinasa amin'ny famolavolana paikady marketing ara-tsosialy mahomby. Tena tiako ny fandefasana ireo dingana saingy tsapako koa fa orinasa maro no tsy manana ny loharano rehetra hametrahana ny fitakiana paikady sosialy lehibe. Ny fiverenana amin'ny fananganana mpihaino ho lasa vondrom-piarahamonina ary mitondra vokatra azo refesina azo refesina matetika dia ela kokoa noho ny faharetan'ny mpitondra ao amin'ny orinasa.
Research ary fantaro ny mpihaino anao, mamantatra ny lohahevitra sy ny zavatra mahaliana azy ireo indrindra.
Safidio fotsiny hampiasa ireo tamba-jotra sy sehatra miresaka tsara amin'ny mpihaino anao.
Lazao ny pifidianana (KPIs). Inona no tadiavinao ho vitan'ny ezaka ara-tsosialy? Manao ahoana ny fahombiazana amin'ny teny azo isaina?
Soraty boky fampianarana marketing amin'ny haino aman-jery sosialy. Ny boky filalaovana dia tokony hanome antsipiriany ny KPI anao, ny mombamomba ny mpihaino, ny olona marika, ny foto-kevitry ny fampielezana, ny hetsika fampiroboroboana, ny fifaninanana, ny lohahevitra atiny, ny dingana fitantanana krizy, sns.
Alahatra ny mpikambana ao amin'ny orinasanao manodidina ny drafitra. Omeo andraikitra ny amin'izay mandefa, iza no mamaly, ary manao ahoana ny fandrefesana ny refy.
Makà 30-60 minitra eo am-piandohan'ny herinandro na isam-bolana handaminana bitsika, lahatsoratra Facebook, lahatsoratra LinkedIn, pin, na atiny media sosialy hafa. Ireo dia mety ho hevitra tany am-boalohany, rohy mankany amin'ny asanao manokana, na rohy mankany amin'ny atiny ivelany izay mety mahasoa na mahaliana ny mpihaino anao.
mamorona banky atiny mampiasa tabilao ary manomana ireo lohahevitra atiny, lohateny, rohy mifandraika, fandaharam-potoana irina, anaran'ireo mpanoratra, ary faritra iray ahazoana alalana amin'ny fitantanana isaky ny andalana.
Post atiny mifandraika mifandraika amin'ny lohahevitra sy hetsika vaovao azo tsapain-tanana amin'ny fotoana mety. Zava-dehibe ny fizarana hevitra raha vantany vao miseho ny vaovao.
Tsarovy daholo fantsona sosialy misaraka. Tsy tokony hamoaka hafatra mitovy amin'ny fantsona rehetra ianao - tadidio hoe iza ny mpanatrika ao ambadiky ny sehatra tsirairay.
Manendre olona hiasa ho toy ny serivisy serivisy ho an'ny mpanjifa mba hamaly ny atiny ateraky ny mpanjifa aterak'izany. Aza odian-tsy hita ny hevitra sy hevitra!
Fandaharam-potoana tatitra! Miankina amin'ny tanjonao, ny metatra fanaovana tatitra dia mety hitranga isan-kerinandro, isam-bolana, na roa volana.
Mamelombelona ny drafitrao tsy tapaka. Raha misy zavatra tsy mandeha ao amin'ny drafitrao, atodiho izany na atiny andrana A / B hamantarana izay valintenin'ny mpihaino anao tsara kokoa.
Tags: mombamomba ny mpihainobigeyemarika personasfoto-kevitra fampielezan-kevitrabanky atinylohahevitra atinylohahevitra atinyfifaninananadingana fitantanana krizySerivisy ho an'ny mpanjifalohatenin-gazetypifidiananakpishetsika fampiroboroboanarohy mifandraikafandaharam-potoanafantsona sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa sosialyfampitoviana amin'ny media sosialyfampahalalam-baovao sosialybanky atiny media sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa media sosialymedia sosialy KPItambajotra sosialybokim-baovao media sosialylahatsoratra media sosialytatitra momba ny media sosialyfikarohana amin'ny haino aman-jery sosialyfandaharam-potoana amin'ny media sosialydingana media sosialyTetikasan'ny media sosialydingana
Stats izay hanampy anao hahazo sitraka sy fanarahana Instagram bebe kokoa
Tanjona, Tetibola, hetsika ary fanamby amin'ny B2014B Digital Digital 2